OnePlus Nord မှာ ဘာတွေ မျော်လင့်လို့ရမလဲ?
အများသူငှာ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေကျတဲ့ OnePlus Mid-range ဖုန်းကို ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့မှာပဲ ကြေညာတော့မှာပါ။
ဒိမတိုင်ခင် Affordable Mid-ranger တွေဖြစ်တဲ့ iPhone SE 2020 ၊ Pixel 4A စီးရီးတို့ မိတ်ဆက် ၊ တာဆူနေတာဖြစ်လို့ OnePlus ရဲ့ Approach က ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ? ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘာတွေ မျော်လင့်ထားလို့ရမလဲ?
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတည်ပြုထားတဲ့ သတင်းတချို့ကို တင်ပြလိုပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ Marketing Campaign တွေကို ရှောင်ရှားလိုက်ပါမယ်။
A new Mid-ranger
Nord ဟာ Mid-range အမျိုးစားဖြစ်ပေမယ့် Powerful ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြိုင်ဖက်တွေရဲ့ Competitive Price (ဆိုကြပါစို့ iPhone SE 2020 ရောင်းစျေးဟာ $399 သာ ရှိပါတယ်) နဲ့ မြင်ရဖို့ အသေအချာ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တခြားသော Brand တွေရဲ့ Mid-range Class တွေထက် ဒီဇိုင်း Language မှာရော Display ၊ Camera နဲ့ System Performance မှာတော့ Premium ဆန်တဲ့ ပုံစံမျိုး ပေးစွမ်းထားမယ်လို့ မျော်လင့်မိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် OnePlus ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုထားတဲ့ Specification တွေအရ Nord စီးရီးဟာ 5G ပါဝင်လာမယ့် Mid-range ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒိအတွက် ခေတ်နဲ့ လျော်ညီစွာ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်တဲ့ Component တွေချည်း သုံးပေးထားတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ Promo Campaign တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
အဆိုပါ OnePlus Nord မှာ 6.44” သို့မဟုတ် 6.55″ အရွယ်စားရှိ AMOLED Display အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ပြီး Fluid 90Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Resolution အနေနဲ့ကတော့ 1,080 x 2,400p Resolution အသုံးပြုထားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး In-display Fingerprint Sensor ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Dual Punch Hole နဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Selfie Camera နှစ်ခု ပါဝင်မယ်လို့ သိထားနိုင်ပါတယ်။ 90Hz Panel ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် Strong ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို Touch Sampling Rate အနေနဲ့ 180Hz ရှိမယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေအရ သိထားရပါတယ်။
Nord ဟာ 5G Device ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ Hardware ပိုင်းအနေနဲ့ Snapdragon 765G SoC တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတချို့အရ Snapdragon 690 နဲ့ မြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ “Lite” Version လည်း ရှိနေတဲ့အချက်ပါ။
Lite ဟာ 4G အမျိုးစား ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တပ်အပ်ပြောနိုင်သလို 5G အလုံးမှာ 8GB (သို့) 12GB RAM ၊ 128GB (သို့) 256GB Storage နဲ့ မြင်ရနိုင်ချေရှိပါတယ်။ (Lite မှာတော့ 6GB RAM အသုံးပြုထားမယ်လို့ သိရပါတယ်)
ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ ကျောဘက်မှာ (၄) လုံး ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး Primary Sensor ဟာ Sony IMX586 48MP Sensor ပါ။ OIS အထောက်ပံ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Sensor ဟာ OnePlus 7T နဲ့ 8 Series မှာ သုံးခဲ့တဲ့ Sensor လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့အတူ 105 Degree ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Ultra-wide 8MP ၊ 5MP Depth Sensor နဲ့ Macro Lens တစ်လုံး ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး Selfie အတွက်ကို 32MP Primary Sensor နဲ့ Ultra-wide တစ်လုံး သုံးပေးထားမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
Along with TWS Earbuds
ဘက်ထရီ ပိုင်းအနေနဲ့ တိတိကျကျ သိရှိရတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် ခန့်မှန်းချက်တွေအရ 4,300mAh Capacity ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Fast Charging အတွက် 30W Warp Charge အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Wireless Charging စနစ်ကို ထောက်ပံ့ထားခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ OnePlus Nord နဲ့အတူ TWS OnePlus Buds ကိုလည်း ကြေညာနိုင်ပြီး Noise Cancellation ၊ 30hrs Battery နဲ့ Fast Charging အစရှိတဲ့ Feature တချို့ ပါဝင်မယ်လို့တော့ ပေါက်ကြားထားပါတယ်။
ရောင်းချသွားမယ့် စျေးနှုန်းအနေနဲ့က $500 ခန့်မှန်းစျေး ရှိနိုင်ပြီး OnePlus Nord ကို စိတ်ဝင်စားနေကြလား? ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့ည ၈ နာရီ အချိန်မှာ မိတ်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီး OnePlus Nord AR App ကတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Source: GSMArena ၊ The Verge